एमालेले सोच्नुपर्ने कुरा
अन्नपूर्ण टुडे मंगलवार, पुस २६, २०७३ 9856 पटक पढिएको
संसद्को शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नेकपा एमाले अहिले मुलुकको दोस्रो ठूलो दल हो । तर, मनोवैज्ञानिक प्रभावका हिसाबले एमालेलाई सबैभन्दा बलियो पार्टीका रूपमा लिइन्छ । यसले लिने निर्णय र बाटोले सम्पूर्ण राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा यो पार्टी अहिले महत्वपूर्ण स्थानमा छ । राजनीतिक गतिरोध जारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो बढेको छैन । राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत हुने हुन् कि होइनन् ? संशय र द्विविधा छ ।
यस्तो बेला मुलुकमा नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । जसले परिपक्व र संयोजनकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । विगतदेखि नै संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एमालेले अहिले राजनीतिक गतिरोध हटाएर राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न फेरि एकपटक सुझबुझ राख्दै जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिएको छ । केही समययता सरकारले अगाडि सारेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन नदिएर एमाले अपरिपक्व देखियो । हालै सर्वोच्चले प्रक्रिया बढाउन आदेश गरेपछि केही लचिलो भएको छ ।
सर्वोच्चकै आदेशले संविधानको व्याख्या गर्दै सीमांकन हेरेफेर प्रदेश सभाले मात्रै गर्न सक्ने भनेपछि एमालेलाई पनि केही राहत मिलेको छ । उसले आउँदो संसद् अवरोध नगर्ने संकेत गरिसकेको छ । अवरुद्ध संसद् खुलेर बहसको प्रक्रिया सुरु हुँदा तत्कालको गतिरोध हट्ने देखिए पनि हाम्रो मुख्य मुद्दा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि असन्तुष्ट मधेशी दललाई प्रक्रियामा समाहित गर्ने, ७ माघ ०७४ भित्र तीन तहकै चुनाव गरिसक्ने, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने आदि महत्वपूर्ण दायित्व दलहरूको काँधमा छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बलियो देखिएको एमालेको दायित्व अझ बढी छ ।
एमालेले प्रदेशको सीमा हेरफेर प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ भने सरकार विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई जुटाउने प्रयत्नमा छ । सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्दै प्रदेश सभाले सीमांकनको हेरफेर गर्न सक्ने बताइसकेपछि अब दलहरू यसलाई विवादको विषय बनाउनुभन्दा चुनावी बाटोमा अग्रसर हुनु उचित देखिन्छ । सीमांकनका मुद्दालाई प्रदेश सभाले सम्बोधन गर्ने गरी दलहरूबीच ७ माघ ०७४ अगावै निर्वाचनमा जाने कुरामा सहमति बन्नु आवश्यक देखिन्छ, जसले राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सघाउ पुर्याउने छ ।
संविधान कार्यान्वयन पूर्णतः अघि बढ्न नसक्नुमा घरेलु कारण मात्रै होइन, छिमेकले देखाएको अनावश्यक चासो पनि जिम्मेवार छ । छिमेकसँगको सम्बन्धमा पनि एमालेले बडो चातुर्य र सुझबुझ ढंगले बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एमाले नेतृत्वसँग भारत चिढिएको छ । मधेशी राजनीतिक नेतृत्व पनि चिढिएको छ । यी चिढिएका घरेलु र बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने दायित्व पनि एमालेकै हो । एमाले नेतृत्व खासगरी अध्यक्ष केपी ओली सरकारले जुन परिस्थितिमा चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लग्यो, त्यो तारिफयोग्य कदम थियो ।
नेपाल र यहाँका नेतालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमै राख्न चाहने भारतीय प्रवृत्तिलाई त्यो गतिलो जवाफ थियो । त्यस कदमपछि ओलीको सर्वत्र प्रशंसा पनि भयो तर त्यसैका आधारमा एमाले बहकिनुचाहिँ हुँदैन । एमाले ‘मोडरेट’ शक्ति हो । यसको चरित्र संयोजनकारी छ । यो प्रगतिशील र राष्ट्रवादीहरूको पार्टी हो । उग्रराष्ट्रवाद र दक्षिणपन्थी भड्कावबाट एमाले नेतृत्व बच्नुपर्छ । आफूलाई पहाडमा मात्रै होइन, मधेशमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । मधेशी जनतामा आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । अहिले केहीयता एमाले नेता मधेश ओर्लन थालेका छन्, जुन सकारात्मक छ ।
भारतले निश्चय पनि मधेशलाई एउटा कार्डको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ र गर्नेछ । त्यसैका आधारमा मधेशप्रतिको सोचमा आग्रह देखिनु हुँदैन । मधेशलाई अनुदार भएर होइन, उदारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ । भारतसँग पनि कुटनीतिक चातुर्य र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले ‘डिल’ गर्न सक्नुपर्छ । एमालेको सुझबुझपूर्ण निर्णय मुलुकको भविष्यका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।
आइतवार, जेठ २१, २०७४ प्रचण्डको ‘गिरिजापथ’
शुक्रवार, बैशाख २९, २०७४ स्थानीय चुनावमा अर्बौंको खेलो
शुक्रवार, बैशाख १५, २०७४ २१ बर्षीया मेयर उम्मेदवार दर्शनाको ‘चुुनाव-दर्शन’
बुधवार, बैशाख ६, २०७४ विदाका दिन पनि कार्यालयमै हुन्छन् कुलमान
शुक्रवार, चैत १८, २०७३ प्रचण्डको चीनसम्बन्ध : सुध्रियो त ?
सोमवार, चैत ७, २०७३ मधेशमा वर्गीय वर्चश्‍व
मंगलवार, फागुन २४, २०७३ नेपाली समाजमा योनीका कथा !
आइतवार, फागुन १५, २०७३ स्ववियुको औचित्यमै प्रश्न
फेरि २२ सीडीओसहित ३१ जनाको सरुवा 13440
राज्यमन्त्री थपिएपछि ‘भद्रगोल' मन्त्रालय 19795
किसुनजीको चिठी 268
सडक दुर्घटनामा पूर्व प्रहरी हवल्दार श्रेष्ठको मृत्यु 2482
मोटरसाइकलले ठक्करबाट एक यात्रुको निधन 4919
सशस्त्र प्रहरी जवानको हत्या 11746
पाशुपत क्षेत्रमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड 758